﻿	လွယ်ကူသော Cheesecake စာရွက် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဘယ်မှာငရုတ်သီးဒိန်ခဲ fries ရဖို့
မြေအမဲသားနှင့်မုန့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ taco သို့ကျဆင်းလာ
လွယ်ကူသော Cheesecake စာရွက်
ချိစ် ကြွယ်ဝပြီး creamy အချိုပွဲဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုလုပ်ဖို့မခက်ဘူးလို့ကတိပေးတယ်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့လေးမျိုးပါဝင်တဲ့အဆာကမအောင်မြင်နိုင်လောက်အောင်အရသာရှိပြီးအရသာပြည့်ဝတဲ့သီးတွေ၊ ဝက်အူချောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။
သင်တစ် ဦး savory နှင့်အတူမှားမသွားနိုင်ပါ ဖရုံသီးဒိန်ခဲ ကျဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်တစ် tart ၌တည်၏ သံပုရာ cheesecake နွေ ဦး ရာသီ၌, ဒါပေမယ့်ဒီလွယ်ကူဂန္ cheesecake စာရွက်နှစ်စဉ်မဆိုအချိန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော!
ဒီချိစ်ကိတ်ကအရမ်းချောချောမွေ့မွေ့တဲ့အတွက်ထောပတ်တစ်ခွက်မှာအမှုဆောင်တယ် ဂရေဟမ် cracker အပေါ်ယံလွှာ ။
ဖြည့်စွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရွက်နှုန်း) ။ အလွန်အမင်းမရောနှောခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါကယင်းသည်အက်ကြောင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။
စာနယ်ဇင်းတစ် ဦး ရဲ့အောက်ခြေမှာပြင်ဆင်ထားဂရေဟမ်အပေါ်ယံလွှာ springform ဒယ်အိုး ။
သင် Waterbath လိုအပ်ပါသလား?
မဟုတ်ပါ၊ ရေလောင်းရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်မုန့်ဖုတ်ရန်အတွက်ပင်အထောက်အကူဖြစ်စေပြီးအက်ကြောင်းကိုလည်းဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပုံရသော်လည်း၎င်းကိုသင်လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်သာကြာသည်။
ဒါကိုတော့ရှောင်ရှားရန် , springform ဒယ်အိုး၏အပြင်ဘက်တွင်ပတ်ပတ်လည်လူမီနီယံသတ္တုပါး၏အလွှာနှစ်ခုအလွှာတန်းနှင့်ကြီးမားသောဒယ်အိုးထဲမှာထားပါ။ ဒယ်အိုးတစ်ဝက်ကိုရေနှင့်ဖြည့်ပါ။ သင်ဤနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါကမုန့်ဖုတ်။ မီးဖို၌အနည်းငယ်မျှအေးရန်ခွင့်ပြုပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအအေး။
သင်ရေရေချိုးမသုံးပါက မင်းရဲ့ဒိန်ခဲကကြီးနေတုန်းပဲ။ မီးဖိုထဲမှချိစ်ကိတ်မုန့်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးဒယ်အိုးမှချိစ်ကိတ်မုန့်ကိုလျှော့ချရန်အပေါ်ယံစွန်းပတ်လည်တွင်ဓားတစ်ချောင်းမောင်းပါ။ cheesecake မှဒယ်အိုးကိုဖယ်ရှား။ အနည်းဆုံး ၄ နာရီရေခဲသေတ္တာထဲတွင် cheesecake ကိုအအေးခံပါ။
အရသာ Topping Options ကို
ဤသည် cheesecake နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကောင်းသည်တကား! ချိစ်ကိတ်မုန့်တိုင်းအတွက်မင်းများစွာနှင့်ငံပြာရည်များစွာရှိသည်။
ချိုမြိန်: စတော်ဘယ်ရီ, ချယ်ရီ, Raspberry, မက်မွန်, ချောကလက် နှင့် Caramel ။
ကြာရှည် သံပုရာသို့မဟုတ် ခရန်ဘယ်ရီ ။
ချောမောဖွယ်ကောင်းသော: ရွှေဖရုံသီးသို့မဟုတ် Apple!
Cheesecake ကရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၅ ရက်လောက်ကြာအောင်နေလိမ့်မယ်။ သူကတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထုပ်ထားရင်ဒါမှမဟုတ်လေလုံတဲ့ကွန်တိန်နာထဲမှာသိုထားတာဖြစ်လို့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာရှိတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကနေအနံ့တွေကိုစုပ်ယူမှာမဟုတ်ဘူး။
မင်းသေချာတာပေါ့! သင်တစ် ဦး ချင်းစီအနေနှင့်ဖြစ်စေသီးခြားစီဖြစ်စေအေးခဲနေစေကာမူ၎င်းတို့အားပလပ်စတစ်အိတ်ထဲတွင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ထားပါ၊ ထို့နောက်ဇစ်ပါအိတ်များသို့မဟုတ်လေလုံသည့်ကွန်တိန်နာများတွင်ထားရှိပါ။ အဆိုပါ cheesecake ချိန်းတွေ့ဖို့သေချာပါစေ။ တစ်လလောက်ကြာသင့်တယ်
လွယ်ကူသော Cheesecake ချက်ပြုတ်နည်းများ
Mini Cheesecakes - ကိုက်ကိုက်!
လက်ငင်း Cheesecake အိုး - ဒါလွယ်ကူ!
Apple Cheesecake Pie - နှစ်ခုမျက်နှာသာပေါင်းစပ်!
Oreo No Bake ဒိန်ခဲ - အလင်း & fluffy
သံပုရာဒိန်ခဲ - မလွယ်ကူသောမုန့်ဖုတ်ဖြစ်သည်။
လွယ်ကူသော Sopapilla ဒိန်ခဲ - ကြွယ်ဝသော & creamy
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃၅ မိနစ်များ အေးမြသောအချိန်55 မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၂ အပိုင်းပိုင်း စာရေးသူHolly Nilsson ဤအိမ်လုပ်ချိစ်ကိတ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော၊ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် ခွက် ဂရေဟမ်
▢နှစ် ဇွန်း သကြား
▢⅔ ခွက် ထောပတ် အရည်ပျော်
▢၂၄ အောင်စ ဒိန်ခဲမုန့် ပျော့ပျောင်းသည်
▢၁ ခွက် သကြား
ကောင်းစွာပေါင်းစပ်သည်အထိအပေါ်ယံလွှာပါဝင်ပစ္စည်းများရောမွှေပါ။9'springform ဒယ်အိုးထဲသို့နှိပ်ပါ။
fluffy သည်အထိမုန့်ဒိန်ခဲ, သကြားနှင့် vanilla Beat ။
တစ်ကြိမ်လျှင်ကြက်ဥတစ်လုံးထည့်ပြီးပေါင်းထည့်သည့်အထိရိုက်ပါ (အလွန်အကျွံမလုပ်ပါနှင့်၊ ဒါကအက်ကြောင်းဖြစ်စေသည်) ။
ဒိန်ခဲအပေါ်ယံလွှာထဲသို့ ၃၅-၄၅ မိနစ်ဖုတ်ရမည်။ မှတ်စုကိုကြည့်ပါ။ (အလယ်ပိုင်းမှာ wobbly နည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်) ။
မီးဖိုကနေ Remove နှင့် 10 မိနစ်အေး။ လျှော့ချရန်အပေါ်ယံလွှာ၏အစွန်းပတ်လည်ညင်ညင်သာသာဓားကို run ။ 45 မိနစ်အေး။
springform ဒယ်အိုးကိုဖယ်ရှား။ အနည်းဆုံး ၄ နာရီ (သို့) တစ်ညအေးအေး။ အေးအောင်ထားပါ။
မှတ်ချက်။ ။ အက်ကြောင်းများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် Springform ဒယ်အိုးသည်သတ္တုပါးလွှာသောအလွှာ ၂ ခုဖြင့်ထုပ်ပြီးမုန့်ဖုတ်ရန်ရေထည့်နိုင်သည်။ Springform ဒယ်အိုးတစ်ဝက်အထိရောက်ရန်ဒယ်အိုးထဲတွင်လုံလောက်သောရေကိုသွန်းလောင်းပါ။ မိနစ် ၅၀ ဖုတ်ပါ။ မီးဖိုကိုပိတ်ထားပါ၊ တံခါးကိုအနည်းငယ်ဖွင့်ကာချိစ်ကိတ်မုန့်ကိုတစ်နာရီမျှမီးဖို၌အအေးခံပါ။ မီးဖိုထဲမှဖယ်ရှား, springform ဒယ်အိုးထဲကနေဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာလုံးဝအအေး။
ဤအဆင့်သည်ရွေးချယ်စရာမရှိသော်လည်းချိစ်ကိတ်မုန့်ကိုအက်ကွဲခြင်းမှရှောင်ရှား။ ပို၍ ညီမျှစွာဖုတ်နိုင်သည်။
သော့ချက်စာလုံးချိစ် သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။